Fact Sheet Myanmar 2016 by Mae Fah Luang University - issuu
မယ့်ဖွါလွမ်တက္ကသိုလ်သည် အာဆီယံသုံးနိုင်ငံဆုံမှတ် မဲခေါင်ရွှေတိဂံနယ်မြေ၏၀င်ပေါက်တံခါးဝတွင်တည်ရှိပါသည်။၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက သီခြားအုပ်ချုပ်မှုနယ်ပယ်(သီးခြားတက္ကသိုလ်အ ဖြစ်) တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဤတက္ကသိုလ်ကို ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်၏ မယ်တော်မိဖုရားခေါင်ကြီးသီရိနာဂရင်ဒြာ (Her Royal Highness Princess Srinagarindra) မှ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသားများနှ င့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အကြင်နာကြီးစွာဖြင့် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သူမကိုလေးစားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖွင့်လှစ်ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှုအ မြန်ဆုံးကျောင်းတော်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ အဓိကဘာသာရပ်အားလုံးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး နည်းစနစ်အပိုင်းကိုတော့ မယ့်ဖွါလွမ်၏ နည်းလမ်းဥပဒေသများဖြင့် သင်ကြားပျိုးထောင်ပေးပါသည်။ “ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှတက္ကသိုလ်” ဟူသောအယူအဆ အကျိုးတရားကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လာရောက်ကြသော ဧည့်သည်တော်များအားလုံးနှင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအားလုံးကို ပတ်ဝန်းကျင် ယဉ်ကျေးမှုထုံးစံများနှင့် ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရင်း စာပေပညာသင်ကြားလိုချင်စိတ်ကို ဆွဲဆောင်ဖြစ်ပေါ် စေပါသည်။ပျော်ရွှင်ဖွယ် အရာများကို ခံစားကြည့်ရန် မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်မှ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှလာတက်ကြသောကျောင်းသူကျောင်းသားများအား လုံးနှင့် ဒေသခံပြည်သူကျောင်းသားကျောင်းသူများ အချင်းချင်း ပူးတွဲဆောင်ရွက်တတ်ရန် ၊ပါဝင်ကူညီတတ်ရန်၊တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူညီစာနာတတ်ရန်တို့ကို ရည်ရွယ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာရေးရာအဖွဲ့အစည်း (The International Affairs Division) ကလည်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအား လုံး၏ လိုအပ်ချက်များကို ကူညီဖြည့်စည်းပေးပါသည်။ သင်တို့၏ အနာဂတ်ထွန်းလင်း တောက်ပဖို့ဆိုရင်တော့ မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်ကို ဦးစားပေးစဉ်းစားပါရန် မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်မှ လှိုက် လှဲစွာကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
အာဆီယံဒေသအတွင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံများတွင် အဆင့်မြင့် သင်ကြားခြင်း နှင့် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ၊ကျွမ်းကျင်ထူးချွန်သော ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည်ဝ၍ ဦးဆောင်နိုင်သော စိုက်ပိ်ျုးရေးကျောင်းဆင်းများ ၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ထုပ်ပိုးကျွမ်းကျင်သော အသိပညာရှင် ၊ အတတ်ပညာရှင်များ ထွက်ပေါ်လာစေရန်အထူးအလေးပေး သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးနေပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Sc. in Food Technology (အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံဘွဲ့ ) •	B.Sc. in Technology Management of Agricultural Produce and Packaging	(စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာဘွဲ့ ) ဘွဲ့  လွန် •	M.Sc. and Ph.D. in Food Technology (အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့ ) •	M.Sc. in Technology Management of Agricultural Produce (စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ မဟာဘွဲ့ )
အလှအပဆိုင်ရာ နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် ရှေ့ဆောင်ပထမဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်တည်ထောင်ထားသော ကြောင့် ကျောင်းသူ ၊ကျောင်းသားများကို သုတေသနပြုခြင်း ၊ ခေတ်မီ၍ ခေတ်ရှေ့ပြေးသော အသိပညာ ၊ အတတ်ပညာများဖြင့် လေ့ကျင့်မှု ၊ စမ်းသပ်မှုများစွာဖြင့် အထူးသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည် ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အလှအပဆိုင်ရာနည်းပညာနယ်ပယ်တွင် အဆင့်အမြင့်ဆုံး ကျောင်းအဖြစ် မကြာမီကာလအတွင်းထိုးဖောက် အောင်မြင် မည်ဟုခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်ဖြင့် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ဘွဲ့  လွန် •	M.Sc. and Ph.D. in Anti-Aging and Regenerative Medicine (နုပျိုခြင်းနှင့် နုသစ်စေသောဆေးဖက်ဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့ ) •	M.Sc. and Ph.D. in Anti-Aging and Regenerative Science (နုပျိုခြင်းနှင့် နုသစ်စေသောဆေးသိပ္ပံ မဟာဘွဲ့ နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ) •	M.Sc. and Ph.D. in Dermatology (အရေပြားရောဂါဗေဒ မဟာဘွဲ့ နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ)
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာရှင်များကို မွေးထုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အဆင့်မြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး မြင့်မားစေရန် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီနည်းပညာများဖြင့် သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည။်သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တိုင်းကို အခြေခံမှစပြီး လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သည်အထိ ရိုးရာနည်းပညာ ဒေသဆိုင်ရာနည်းပညာ များနှင့်ခေတ်မီနည်းစနစ်တို့ကိုပေါင်းစပ်၍ ထူးခြားဆန်းသစ်သောပညာရပ် များကိုသင်ကြားပေးပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.ATM. in Applied Thai Traditional Medicine (Students must be fluent in Thai) (အသုံးချထိုင်းဆေးဝါးကျွမ်းကျင်) (တက်ရောက်လိုသောကျောင်းသားသည် ထိုင်းစကား ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောနိင်ရမည်။) •	B.CM. in Traditional Chinese Medicine (တရုတ်ရိုးရာဆေးပညာ်) •	B.PT. in Physical Therapy (Students must be fluent in Thai) (အကြောကိုင်နည်းပညာကုထုံး) (တက်ရောက်လိုသောကျောင်းသားသည် ထိုင်းစကား ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောနိင်ရမည်။) •	B.P.H. in Public Health (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး) •	B.Sc. in Environmental Health (ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနည်းပညာ်) •	B.Sc. in Occupational Health and Safety (ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း) •	B.Sc. in Sports and Health Science (အားကစားနှင့် ကျန်းမာရေးနည်းပညာ) ဘွဲ့  လွန •	M.Sc. in Public Health (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး)
အရည်အသွေးပြည့်မှီသောသူနာပြု များကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် ပြည်တွင်းတွင်သာမက နိုင်ငံတကာကပါ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဖက် အထက်ပိုင်းဒေသနှင့် မယ်ခေါင် နယ်စပ်ဒေသ တွင် မီးပြတိ်ုက်သဖွယ် လမ်းပြ၍ ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.S.N. in Nursing Science (Only for Thai citizens) (သူနာပြု ဘွဲ့ )( ထိုင်းနိုင်ငံသားများသာ)
မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်၏ တိုးတက်မှုအမြင့်ဆုံးဘာသာရပ်ဖြစ် သည်။ ကမ္ဘာအဆင့်မှီ ဘွဲ့ရပညာတတ်များနှင့် သုတေသနပညာရှင်များ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ စိတ်ကူးဥာဏ် အမျှော်အမြင် ကြီးမားပြီး၊ အားကျဂုဏ်ယူ ဖွယ်ကောင်းသော ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီသော၊ အမြင်စူးရှသော ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်သောအ တတ်ပညာရှင်များ ကိုယ်တိုင် ဘက်စုံထောင့်စုံမှ ပြိုင်ဘက်ကင်းအ တတ်ပညာရှင်များဖြစ်လာစေရန် ပြုစုပျိုးထောင် ပေးလိုသည့်အတွက် မယ့်ဖွါလွမ်တက္ကသိုလ်၏ သတင်းနှင့် နည်းပညာဌာနမှ လှိုက်လှဲ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုနေပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Eng. in Computer Engineering (ကွန်ပျူတာ အင်ဂျင်နီယာ) •	B.Eng. in Information and Communication Engineering (သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ) •	B.Sc. in Computer Science (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ) •	B.Sc. in Information Technology (သတင်းနည်းပညာ) •	B.Sc. in Multimedia Technology and Animation (ရုပ်သံလုပ်ရှားမှုနှင့် တင်ဆက်မှုနည်းပညာ) •	B.Sc. in Software Engineering (ဆော့ဖ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာ) ဘွဲ့  လွန •	M.Eng. and Ph.D. in Computer Engineering (ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာမဟာဘွဲ့ နှင့်ဒေါက်တာဘွဲ) •	M.Sc. in Information Technology (သတင်းနည်းပညာမဟာဘွဲ)
နယ်စပ်ဒေသရှိ ဥပဒေကျောင်းများတွင်ခေတ်နှင့်အညီ တိကျသေချာ သော စည်းမျဉ်းဥပဒေများကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်သင်ကြားပို့ချ ရန်၊ အချို့ သောပညာရပ် နယ်ပယ်နှင့်မဆိုင်သော တရားရေးစီမံချက်များကို လည်းနားလည်တတ်ကျွမ်းရန် အရေးကြီးသော စည်းမျဉ်းဥပဒေများကို သင်ကြားပေးပါသည်။ ဥပဒေဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားစေလိုခြင်း ရဲ့  ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအသိဥာဏ်ပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွါးစေရန် ၊ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို စာတွေ့ပိုင်း အရသော်လည်းကောင်း၊ လက်တွေ့ပိုင်းအရပါ လည်းကောင်း နားလည်သိတတ်ကျွမ်း စေလိုပြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌ အရေးပါဆုံးဖြစ်သော လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊တရားမျှတမှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားအ ပါအ ၀င် ဥပဒေပေါင်းများစွာကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်၊၊ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	LL.B. in Laws (ဥပဒေ) ဘွဲ့  လွန •	LL.M. in Laws (Students must be fluent in Thai) (ဥပဒေမဟာဘွဲ့ )(ကျောင်းသားများသည်ထိုင်းဘာသာ စကားကိုကျွမ်း ကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။)
ထိငုးနငို င်နံငှ့် ၄င်း၏ အနီးတစ်ဝကို ရ်ှေိ ဒသများမှ အစိုး ရဌာနဆိငုရ်ာများ၊ စက်မလှု က်မှု လုပင်န်းများ၊ အာဆီယကံူး သန်းရောင်းဝယ်ရေး တို့ အတွက် လုအိပ်သော လက်မအှု တတ်ပညာကျွမ်းကျင်သ၊ူ ခေတ်ပ်ညာတတ်လငူယ်များစွာကို မွေးထုတရ်န် ရည်ရယွပ်ါသည်။ စီး ပွားရေးဆိငုရ်ာဘာသာများစွာထဲမှာ အရေးပါဆံုး သောစီမခံန့်ခွမှဲု ဘာသာရပ်များဖြစ်ပါသည်။ ကျယ်ပြန့်သောကြီးကျယ်ခန်းနားသည့် ကမ်းလမ်းမှမျှုားကို ဘာသာရပ်ဆငို ရ်ာ သင်ရိးု ညွန်း တမ်းအမျိုးမျိုးတို့ ဖြင့် ခေတ်မစှီ နစ်ကျလှစွာ သင်ကြားပေးနေသည့်အပြင် အကျိုးအမြတ်အနေအ ဖြင့်နိငုင်ရံပ်ခြားရှိ နာမည်ကြီး တက္ကသလို မ်ျားသို့ အပြန်အလှနသ်ွားရောက် သင်ကြားနိငုေ်သာ အခွင့် အရေးများကို ချိတဆ်က်ပေးထားပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Acc. in Accounting (စာရင်းကိုင်) •	B.B.A. in Aviation Business Management (လေကြောင်းစီမံ) - Aviation Services (လေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု) - Aviation Logistics Business (လေကြောင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး) - Aviation Operations (လေကြောင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြင်ဆင်ခြင်း) •	B.B.A. in Business Administration (စီးပွားစီမံ) •	B.B.A. in Hospitality Industry Management (ကြိုဆိုဧည့်ခံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု) •	B.B.A. in Logistics and Supply Chain Management (ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ) •	B.B.A. in Tourism Management (ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ) •	B.Econ. in Economics (စီးပွားရေး) ဘွဲ့  လွန •	M.B.A. and Ph.D. in Business Administration (စီးပွားရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း) •	M.B.A. in Entrepreneurial Management (International Programme) (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ) •	M.B.A. in Logistics and Supply Chain Management (ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ) •	M.B.A. in Tourism Management (ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ)
နိငုင်ြံ ခားဘာသာစကားမျိုးစုနံငှ့် ယဉ်ကျေးမှု တိက့ုို အရည်အသွေး ပြည်ဝစွာဖြင့် တတ်မြောက်နင်ိုြ် ပီး သင်ထောက်ကပူစ္စည်း စံလုင်စွာ ဖြင့် အကောင်းဆံုး သင် ကြားပေးရန်ရည်ရယွခ်ျက်ဖြင့် ဖွငလ့် စှထ်ားပါသည်။ ထိငုး ဘာသာစကားနှင့် နိငုင်ြံ ခားဘာသာစကားမျိုးစုံ အတွက် ထူးချွန်ေပြာင်မြောက်သောသူ များဖြစ်လာစေနိငုေ်သာကျောင်းဖြစ်ပြီး နိငုင်တံကာနှငပ့် တ်သက်၍ စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့် အစီအစဉ်များကို လေ့လာသင်ကြားရရှနိငိုေ် သာ ပြိုင်ဖက်မရှအိကောင်းဆံုး ကျောင်း ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.A. in English (အင်္ဂလိပ်အထူးပြုဘာသာ) •	B.A. in Thai Language and Culture (ထိုင်း ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှု) ဘွဲ့  လွန •	M.A. and Ph.D. in English for Professional Development (အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု မဟာဘွဲ့ နှင့်ဒေါက်တာဘွဲ့)
ခေတ်မသီပိပံ္ပ ညာရပ်များကိစုဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းလေ့လာပြီး နိငုင်တံကာ၏ တိုး တက်မလှုပုရ်ှားမှု နည်းပညာများ ၊ပညာရေးအရည်အသွေးမြှငတ့် င် ခြင်းများကို အဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ကျွမ်း ကျင်၊ တော်ထက်မြက်သော ပညာတတ်များကိေုမွးထုတြ် ခင်းဖြင့် သိပနံ္ပ ငှန့် ည်းပညာ ၊စီးပွါးရေး၊ လူမှေုရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆငို ရ်ာများကို ဖြွံ့ ဖိုးတိုး တက်မမျှုားကိရုရှိ စေရန် ဖြစ်ပါသည်၊၊ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Sc. in Applied Chemistry (အသုံးချ ဓါတု) - Analytical Chemistry (ဓါတုဗေဒ အရခွဲခြားခြင်း) - Natural Products (သဘာဝထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် နည်းပညာ) - Polymer Science and Technology (ပေါ်လီမာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ) •	B.Sc. in Biosciences (ဇီဝသိပ္ပံဘွဲ့ ) •	B.Eng. in Materials Engineering (ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ) ဘွဲ့  လွန •	M.Sc. and Ph.D. in Applied Chemistry (အသုံးချဓါတု) •	M.Sc. and Ph.D. in Biosciences (ဇီဝသိပ္ပံဘွဲ့ ) •	M.Sc. and Ph.D. in Biotechnology (ဇီဝနည်းပညာ) •	M.Sc. and Ph.D. in Computational Science (ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာ) •	M.Sc. and Ph.D. in Materials Science (ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာနည်းပညာ) •	M.Sc. and Ph.D. in Natural Resources and Environmental Management (NREM) (International Programme) (သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး) (NREM နိုင်ငံတကာအစီအစဉ်)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ၊ စီးပွါးရေး ၊ လူမှုရေး ၊နိုင်ငံရေး နှင့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး စသည့် ကဏ္ဍများနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာနားလည်သဘောပေါက်စေရန် ၊ တရုတ်ဘာသာစကား ၊ ဘာသာရပ်သင်ခန်းစာ လေ့လာသင်ယုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်နားလည် တတ်မြောက်သော အရည်အချင်း များနှင့် ပြည်စုံသော ဘွဲ့ ရပညာတတ်များကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.A. in Business Chinese (လုပ်ငန်းသုံး တရုတ်ဘာသာ) •	B.A. in Chinese Language and Culture (တရုတ်ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှု) •	B.A. in Chinese Studies (Focused on the Policy and Strategy of China) (တရုတ်နိုင်ငံရေးနှင့် သေနင်္ဂဗျူဟာအတတ် အနီးကပ်ပို့ချခြင်း ၊လေ့လာခြင်း) •	B.Ed. in Teaching Chinese Language (5 years) (တရုတ်ဘာသာဆရာအတတ်သင်) (၅နှစ်) ဘွဲ့လွန် ဘွဲ့  လွန •	M.A. in Chinese - Thai Translation and Interpretation (တရုတ်-ထိုင်း ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း) ( * တရုတ်ကျောင်းသားများလက်မခံပါ ။) (** ကျောင်းသားများသည် တရုတ်နှင့် ထိုင်းဘာသာစကား နှစ်မျိုးစလုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည် ။) •	M.A. in Teaching Chinese asaForeign Language (မာစတာဘွဲ့လွန်တွင်တရုတ်ဘာသာစကားကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအဖြစ်သင်ကြားသည်။)
၃။ ။လက်ခံကြောင်းအကြောင်းပြန်စာ • အနီးစပ်ဆုံး၂ပတ်အကြာတွင် အီးမေးလ် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်း ဖြင့်လက်ခံရရှိကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။ • အင်တာဗျူး လိုအပ်ပါက တယ်လီဖုန်း(သို့မဟုတ်) အင်တာနက် စကိုင်းဗွီဒီယို (Skypevideo call)ဖြင့် ဆက်သွယ်ပါမည်။ အခြားအထောက်အထားများလိုအပ်ပါက အစီရင်ခံစာပို့လိုက်ပါမည်။ • အင်တာဗျူးအောင်ပါက လိုအပ်သောကျောင်းလက်ခံစာရွက် ၊ဗီဇာပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သောရုံးပိုင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ပို့လိုက်ပါမည်။
၅။ ။ကျောင်းအပ်ခြင်း • လိုအပ်သောထောက်ခံစာမူရင်းများကိုမိတ္တူကူးပြီး ကျောင်းသားရေး ရာဌာနသို့ပေးပို့ရမည်။ • တစ်ကြိမ်အမည်စာရင်းသွင်းပြီး ကျောင်းလခအပြည့်သွင်းပြီးပါက မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်၏ တရားဝင်ကျောင်းသားဖြစ်ပါပြီ။
မယ့်ဖွါလွမ် ကျောင်းနေရန်လိုအပ်ချက်များ ရိုးရိုးဘွဲ့
- တိုဖယ် ရေးဖြေ ၄၅၀
- IELTS ၄.၅
- IELTS ၅.၅
- မယ့်ဖွါလွမ်အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲ- ၄၀မှတ်
လက်မှတ်မရှိသေးသောကျောင်းသားများ ကျောင်းမှဖွင့်လှစ်ထားသော အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသို့ စာရင်းသွင်းတက်ရောက်ရမည်။
ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသို့ စာရင်းသွင်းတက်ရောက်ရမည်။ (ဂ) အဓိကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် သင်ကြားသောကျောင်း(အ
နည်းဆုံးသုံးနှစ်) သင်ကြားအောင်မြင်လာသော ကျောင်းသားများအနေဖြင့်လည်း ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
- တိုဖယ် ရေးဖြေ ၅၀၀ (သို့မဟုတ်) ကွန်ပြူတာ ဖြေ ၂၀၀ (သို့မဟုတ်) အင်တာနက် ၇၀
• မာစတာဘွဲ့သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှ အသိအမှတ်ပြု စာ၊ရိုးရိုးဘွဲ့ (ဂုဏ်ထူး) အောင်မြင်ပြီးဆုံးကြောင်းနှင့် ပျမ်းမျှအမှတ်ပေါင်း ၃.၂၅ သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်အထက်ရှိရပါမည်။ • အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ်အမှတ်
- မယ့်ဖွါလွမ်အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲ- ၆၀မှတ်
ကျောင်းအချိန်ဇယား ပထမနှစ်ဝက်စာသင်နှစ် • ပထမနှစ်ဝက်စ စာသင်ခြင်း • သင်ခန်းစာအလယ်စာမေးပွဲ • နောက်ဆုံးစာသင်ရက်	• ပထမနှစ်ဝက် နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲ	• ပထမနှစ်ဝက်စာသင်ပြီးဆုံးခြင်း	ဒုတိယနှစ်ဝက် စာသင်နှစ် • ဒုတိယနှစ်ဝက်စ စာသင်ခြင်း	• သင်ခန်းစာအလယ်စာမေးပွဲ • နောက်ဆုံးစာသင်ရက်	• ဒုတိယနှစ်ဝက် နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲ	• ဒုတိယနှစ်ဝက်စာသင်ပြီးဆုံးခြင်း နွေရာသီအတန်းများ • စာသင်ရက်အစ	• နောက်ဆုံးစာသင်ရက်	• စာမေးပွဲကြီး	• နောက်ဆုံးစာသင်ချိန်
သြဂုတ်နောက်ဆုံးအပတ် အောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးအပတ် ဒီဇင်ဘာလလယ် ဒီဇင်ဘာလလယ် ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ် ဇန္န၀ါရီလနောက်ဆုံးအပတ် မတ်လနောက်ဆုံးအပတ် မေလလယ် မေလနောက်ဆုံးအပတ် မေလနောက်ဆုံးအပတ် ဇွန်လနောက်ဆုံးအပတ် သြဂုတ်လဆန်း သြဂုတ်လဆန်း သြဂုတ်လဆန်း
ထိုင်းဘတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ *
Tuition Fees ရိုးရိုးဘွဲ့အတွက် နှစ်ဝက်စာသင်စရိတ် ဘွဲ့ လွန် အခြားကုန်ကျစရိတ် ကျောင်းသားသစ်ဝန်ဆောင်ခ (ပထမနှစ်ဝက်) ** အင်္ဂလိပ်စာမွမ်းမံသင်တန်းကြေး ** ကျောင်းတွင်းနေထိုင်နည်းနှင့်သင်ကြားရေးလမ်းညွှန် ** အဆောင်ခ (နှစ်ဝက်နေထိုင်စရိတ်) အထွေထွေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုအာမခံကြေး (ကျောင်းပြီးလျှင်ပြန်အမ်းမည်။) ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်အာမခံကြေး
၁၀၀၀ ၃၆၀၀ ၂၂၀၀ ၄၀၀၀ ၈၀၀ ၂၀၀၀ ၂၃၁၀
၃၁ ၁၁၃ ၆၉ ၁၂၅ ၂၅ ၆၂ ၇၂
မှတ်ချက်။	။ * အမေရိကန် ၁ဒေါ်လာ=၃၂ ဘတ် (အပြောင်းအလဲရှိသည်) ** ရိုးရိုးဘွဲ့ ကျောင်းသားများအတွက်သာ မယ့်ဖွါလွမ် ကျူရှင်စရိတ်များကို ယခင်နှစ်များထက်လျှော့ထားပေးပါသည်။
ခေတ်မှီပြည့်စုံသောစက်ကိရိယာ၊ ဆေးဝါးနှင့်ကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အပြည့်အစုံ ရှိပါသည်။ အရေးပေါ်ဆေးကုသခန်း ၊ရောဂါရှာဖွေခြင်း ၊ဆေးကုသခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးပြည့်စုံခြင်း ၊အ ပြင်တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဝါးနှင့် ဆေးခန်းများပါရှိပါသည်။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအားလုံးအတွက် ပထနှစ်စာသင်ချိန်ကာလအတွင်း နေထိုင်နိုင်ရန် ကျောင်းဝင်းအတွင်း တွင်အဆောင်များရှိသည်။ လေးယောက်လျှင်တစ်ခန်းနေထိုင်ရပါမည်။
ကျောင်းအတွင်းရှိနေရာများအားလုံးသို့ အလွယ်တကူ သွားနိုင်ရန်ပို့ဆောင်ပေးသော အခမဲ့လျှပ်စစ်ကားများထားရှိပေးထား ပါသည်။မြို့ ထဲ သို့မဟုတ်အခြားနေရာများသို့ သွားလာရန် တက်ခ်စီများ မီနီဘတ်စ်များကို လွယ်ကူစွာဆက်သွယ်ခေါ်ယူနိုင်ပါသည်။
•	မိုးလုံလေလုံအားကစားခန်းမ •	Gyn အားကစားခန်းမ •	ဘတ်စကက်ဘောကွင်း •	ကြက်တောင်ကွင်း •	အားကစားလုပ်ရန်လမ်းများနှင့်ကွင်းပြင်ကျယ် •	တင်းနစ်ကွင်း •	အိုလံပစ်ရေကူးကန် •	ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ရန်ပန်းခြံ •	အပြေးလေ့ကျင့်ရန်လမ်းကြောင်းများ •	စက်ဘီးစီးလမ်းများ
သင်ထောက်ကူဌာနများ • • • • •
ကျောင်းသားရေးရာစီမံဌာန သတင်းနှင့် နည်းပညာ စီမံဌာန မယ့်ဖွါလွမ်စာကြည့်တိုက် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာထုတ်လုပ်မှုဌာန ကိုယ်တိုင်ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းဌာန
RESOURCE CENTRES • သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးသင် တန်းကျောင်း • သီရိဒုံတရုတ်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဌာန • မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ် ကွန်ဖြူးရှပ်ကျောင်း • မဲခေါင်ချိင့်ဝှမ်းဒေသ လူနေမှုဘ၀ပြတိုက် • မယ့်ဖွါလွမ်တက္ကသိုလ် ဥဖောက်စက်ကိရိယာလုပ်ငန်း • လက်ဖက်လုပ်ငန်းကျောင်း • ပြင်သစ်နှင့် မယ်ခေါင်နယ်စပ်ပညာရေးပူးပေါင်းမှုဌာန • နယ်စပ်စီးပွါးရေးနှင့် ထောက်ပံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သင်တန်း • ဒေသအခြေစိုက် -လူမှုကွန်ယက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသုတေသ နဌာန
GMS သိသ့ွုားရာလမ်း အာဆီယနံငို င်တံ၏့ို အလယ်ဗဟိတုငွရ်ှေိ သာ ပန်းဥယျာဉ်များထဲကတက္ကသလို မ်ယ်ဖါလွ့ မွ်
Fact Sheet Myanmar 2016